Ukudluliselwa kweeMbono zoMxholo woBomi - Ukunyusa Imali Iingcinga
Ukudluliselwa kweeMbono zoMxholo woBomi
Ukukhetha enye yeenqaku zokudlulisa uBomi yindlela elungileyo yokongeza ulonwabo kulo msitho ukhethekileyo. Imixholo imanyanisa abantu abazimaseyo, yenze imvakalelo yokunxulumana, kwaye yongeze into engalindelekanga kumsitho.
Ukuba uceba ukubamba umsitho weRelay for Life, kutheni ungaqwalaseli ukubandakanya umxholo weRecay for Life kulo msitho? Umxholo ungongeza ukonwabisa njengendlela yokubopha umsitho kunye.
Ukudluliselwa kwiGalari yeNgcamango yoBomi
Iziganeko zikaMichael J Fox
Kukho amathuba angenasiphelo xa kuziwa kwimixholo. Eminye imixholo emnandi yokuqwalaselwa ibandakanya:
Umxholo we-retro ubonelela ngokuzonwabisa okungapheliyo kunye nokuzivocavoca okunempilo. Nxiba iimpahla zeedisco kwaye ungqungqe ubusuku kude kube yimimandla oyithandayo.
Ukudanisa kunye neenkwenkwezi ukuze unyange
Ngokudibana nomntu ohamba ngomkhondo kwiqela lakho ngalo lonke ixesha, bamba umdyarho wokudanisa kwibala elikufutshane okanye usete umgangatho wokudanisa ebaleni elingaphantsi kwenye intente. Fumana abadumileyo bendawo nabengingqi ukuba badanise kunye nawe ubusuku bonke. Iqela lokugqibela limi liphumelele. Ngaba i-spa yendawo inikela ngerubhu yonyawo kunye ne-pedicure yesibini esiphumeleleyo.
Ukudluliswa kosuku lokuzalwa olumnandi
Cwangcisa njengoko unokwenza ngalo naliphi na itheko lokuzalwa. Hombisa indawo kwii-streamers kunye neebhaluni, nikezela ngekhekhe lokuzalwa elihonjisiweyo, kwaye unike umntu ngamnye othatha inxaxheba umnqwazi wosuku lokuzalwa okanye ibhegi yempahla.
Emini emaqanda ngomhlaza
Ngelixa umxholo wasentshona uhlala uthandwa, nika i-classic twist kwaye unamalungu eqela eze enxibe i-Old West gear yale Knock Out kwiCancer Corral! Nantoni na isuka kwi-gunslinger iye kwintombazana yeholo yokudanisa iye kwi Indlu encinci kwiNdawo jonga. I-tailgate okanye i-bonfire hotdog roast, ukuba abathathi-nxaxheba bahlawule ngaphezulu, banokwenza umcimbi ube mnandi ngakumbi.
Abathathi-nxaxheba bavela kwigumbi labo lokulala elifanelekileyo. Amabhaso amabhaso kwiindidi ezinjengegumbi lokulala elingcono, i-fuzziest house slippers, kunye nezona ndleko zininzi zokuyila. Ungakhonza iipopcorn, ubukele imovie kwaye wonwabe ukubonisa inkxaso yakho.
Iqela ngalinye lithatha imibala yalo kunye nabaxhasi ngehashe eliyintandokazi kulo mdyarho wexesha lokulwa nomhlaza. Iikampu zinokuhonjiswa ngemibala, kwaye amalungu eqela angenza kwaye anxibe iisilika zejockey xa zisendleleni.
Indlela enemibala yokubonisa inkxaso inomxholo womnyama. Zihombise isiza ngemvula, kwaye usebenzise imijelo enemibala kunye nemiqondiso. Yenza ubumnandi besitayile somnyama ngaphandle kweebhaluni kwaye usisebenzise njengomnyango wokungena kulo msitho. Iqela ngalinye linokumela umbala owahlukileyo womnyama.
Sebenzisa izitena zokwenyani kwaye ubhale amagama abantu abazonwabisa abaye baphumelela kumhlaza. Ukongeza, amaqela athatha inxaxheba okanye abantu abathile babhala igama lomntu abamaziyo odlulile kumhlaza. Emva koko, beka ngononophelo ezi zitena kwindawo ebotshiweyo ukuze wenze eyakho iNdlela yoDumo. Thengisa izikhanyiso ukukhanyisa uhambo ukubeka ukukhanya kumhlaza.
I-Etiquette efanelekileyo yokuThetha hayi kwiCancer
Iqela ngalinye liza linxibe ii-tuxedos kunye nee gown (ezinxibe izihlangu zokuhamba, ewe). Njengoko behamba ngomkhondo, banokuma kwizikhululo ezahlukeneyo, okanye ekupheleni kwenani elithile lamathanga, bephula iti ephezulu. Oku kunokuba kokonwaba ukuba ufumana iivenkile zokutyela kunye nabapheki ababandakanyekayo ukuseta izitishi kunye nokulungiselela ukutya okunikelweyo. Abathathi-nxaxheba kunye namalungu osapho axhasayo banokuhlawula i-10 yeedola ngomntu ngamnye
Izinja eziPhezulu zomhlaza
Misela amaqela kunye namaqabane e-canine, izilwanyana zasekhaya kunye nokuhlangula izilwanyana kwindawo yokuhlala. Njengabantu kunye nezinja zabo behamba ubusuku bonke, cwangcisa ukunikezela ngeebhiskiti zebikiki kunye necookie ezinjeni ngendlela yokubulela. Qiniseka ukuba unamanzi amaninzi ukuze uhlaziye inxaxheba yabantu kunye ne-canine.
Yenza lo mxholo womlingo usebenzisa i-motif yeenkwenkwezi. Khuthaza umntu ngamnye ukuba enze inkwenkwezi enegama lomntu abamxhasayo. Indawo inokuhonjiswa ngeenkwenkwezi kunye nemiyalezo ekhuthazayo.
Imixholo edlala ngamagama
Izihloko ezenziweyo malunga nale ngcamango zinokuba malunga nantoni na. Yiba ngoyedwa kwaye usebenzise into ebonisa inkxaso yakho enje ngeRobin's Relay Revelers, abaxhasi bakaSams Survivor, okanye uCallie's Cancer Crusaders. Yenza i-t-shirts ezenziwe kunye nefoto yomntu omxhasayo, okanye wenze iibhanile ngegama laloo mntu.
Ukudluliswa kwihlabathi liphela
Yiya kwilizwe jikelele ngokuvumela iqela ngalinye ukuba lithathe ilizwe kwaye linxibe ngokufanelekileyo. Banokuhombisa indawo yabo ngezinto ezimele ilizwe labo njengokutya okanye impahla.
Ithenda kunye neeseksi zinomtsalane kwindalo yonke nakwisini. Hombisa ngezilwanyana ezifakiweyo, dlala imidlalo, kwaye ucinga ngokufumana i-clown yokwenza kunye nokunika iibhaluni zezilwanyana. Ukupeyinta ubuso yenye into eyaziwayo ukongeza kumxube.
Esi sesinye isihloko esinokubhenela kwinani elikhulu labantu bayo yonke iminyaka. Iqela ngalinye linokumela umdlalo owahlukileyo onje ngebhola ekhatywayo, ibaseball, ibhola ekhatywayo kunye ne-bowling.
Imixholo enxulumene nokuzonwabisa
Njani ngokudibanisa Knitters Ukuze Unyango okanye Abadlali bePoker ngokunyanga iqela? Abathathi-nxaxheba banokonwabela amaxesha abo awathandayo kwaye bafundise abanye kwinkqubo.
Yenza ubuGcisa kwiNyango
Njengoko unokucinga, imixholo inokuba yiyo nantoni na onokuthi uphuphe ngayo. Yenza uyilo kwaye usebenzise into enomdla kwiqela lakho. Unokubamba ukhuphiswano ngaphambi komsitho kwaye abantu bangenise imixholo eyahlukeneyo yomsitho. Into ebalulekileyo ekufuneka uyikhumbule kukuba umxholo wokuyila unokunceda iqela lakho ukuba libhiyozele abo baphumelele idabi lomhlaza kunye nokunyusa imali yeenkqubo kunye nophando. Ukuhanjiswa kweminyhadala ebanjiweyo kubanjelwa ezikolweni, kwiipaki okanye kwiitraki, kwaye abathathi-nxaxheba bayatshintshana ukuhamba okanye ukuqhuba iirap ukubonisa inkxaso yabo.
Ukubuyela ebomini kuphakamisa izigidi zeedola ngonyaka ngamnye ukukhusela nokuphanda umdlavuza. Ithemba kukufumana ekugqibeleni unyango lomhlaza, kwaye umsitho unentsingiselo ekhethekileyo kwabo bathatha inxaxheba. Ukubandakanya umxholo weRekhodi yoBomi kumsitho yindlela elungileyo yokwenza usuku lube mnandi kubo bonke abo babandakanyekayo.
Ukuzila Ukutya Kunye Nedetox Diets Amakhadi Ahlawulwe Kwangaphambili Umtshato Decoration Zintandathu Iiflegi Iitheme Parks Ifanitshala Iintengiso Nama Brands
Ukukhempisha, Hikinging, Backpacking Gear And Equipment
Malunga Incwadi Zabantwana
Ukubuyela Umva Camping
Intente Camping Tips
Imifanekiso yeeLokhwe zokuNxiba iiholide
Umndilili woMvuzo woMhlobisi wangaphakathi
I-Chocolate egqunywe iPeeps Pops
Umdaniso wokuNgena koMtshato waseJK
Isoseji kunye nePeppers
iindlela zokugcina incoko iqhubeka
ungabuya umva kangakanani imiyalezo ebhaliweyo
ithetha ntoni intaka ebomvu
ungathatha itylenol ngaphambi kwethambo
Uhlala ixesha elingakanani ukhathalelo lwe-hospice
zeziphi iimpawu ze-sagittarius ezihambelana nazo
Antique Tools Ne Hardware
Ukuthenga Cell Phones
Imibono Yebaby Slides